Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu xakameeyay suuqa smartwatch ee 2018 | Wararka IPhone
Apple Watch wuxuu noqday a qalab muhiim ah kuwa doonaya smartwatch u heellan caafimaadka. Sanadihii la soo dhaafay, tufaaxa weyn wuxuu galiyay ilo badan kobciso alaabtaada adiga oo raadinaya caafimaad iyo smartwatch-ku waa jawharad taaj. Natiijada maalgashigan ayaa ah shaqada ECG iyo ogaanshaha dayrta ee taxanaha Apple Watch 4. Sida ku cad xogtii ugu dambeysay, Apple wuxuu xakameeyay suuqa smartwatch ee 2018 oo leh a 37% saacadaha la iibiyay. Saacadda ugu iibinta badan waxay ahayd Apple Watch Series 4, oo la heli karo oo keliya rubuc. Boodka ka dib waxaan falanqeyneynaa xogtan oo muujineysa xukunka yar ee kuwa Cupertino ee qaybtan.
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu ahaa saacaddii ugu iibsiga badnayd 2018
Shixnadaha Apple Watch waxay kordheen 22% sanadkiiba sanadka adag 2018. Apple Watch Series 4 ayaa ahaa xiddigga. 11.5 milyan oo unug ayaa la iibiyay intii lagu jiray 2018, taas oo ka dhigtay qaabka ugu iibinta wanaagsan sanadka. Waxaan aaminsanahay in guusheeda ay ugu wacan tahay diiradeeda howlaha la xiriira caafimaadka sida ECG iyo ogaanshaha deyrta. Waxaa intaa sii dheer, wax badan ayey ka sheegaysaa inta Apple ka timid Apple Watch oo ah aalad caafimaad oo macno leh.
Qaybtan waxaa laga soo qaatay warbixinta "Global Smartwatch Tracker Q1 2019" oo ay daabacday Counterpoint dhowr saacadood ka hor. Warbixinta ayaa lagu lafa gurayaa iibinta smartwatchesyada kala duwan ee suuqa rubuca hore ee 2019, oo lala barbardhigo wadarta xogta sanadka 2018 iyo 2017. Haddii aan falanqeyno xogta ka socota Apple, waxaan aragnaa sida sanadkii 2017 ay ugu gacan sarreysay suuqa smartwatch oo leh 43% wadarta guud, waqtigaas marka uu tartankaas socday. weli wuu yaraa. Si kastaba ha noqotee, kororka saacaddu wuxuu bilaabmay 2018 taasna waxay la macno ahayd hoos u dhac ku yimid 37% wadarta tirada saacadaha adduunka oo dhan laga iibiyay. Si kastaba ha noqotee, saacadda Apple Watch waxay ahayd saacaddii ugu iibsiga badnayd sanadkaas.
Counterpoint sidoo kale waxay ka warbixisay kuwaas oo ah saacadaha casriga ah ee iibiya inta badan sanadka 2018, oo marka hore la dhigo Apple Watch Taxanaha 4 iyadoo wadar ahaan 11.5 milyan oo unug, oo ay ku xigto Apple Watch Series 3, Fitbit Versa, Imoo Z3 iyo ugu dambeyntii jiilka 2aad ee Apple Watch. Si kale haddii loo dhigo, saacadda weyn ee Apple waxay haysaa saddex meelood oo ka mid ah shanta iibiye ee ugu wanaagsan sannadka 2018.
Daahfurka watchOS 6 waxay u badan tahay inuu caawiyo sannadkan, isagoo siinaya milkiileyaasha moodellada waaweyn sababo cusub oo kor loogu qaadayo, oo ay ku jiraan raadinta jirdhiska oo madax bannaan oo wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu xakameeyay suuqa smartwatch ee 2018